Isishwankathelo sencwadi "Isixeko kunye neenja" nguMario Vargas Llosa | Uncwadi lwangoku
Isishwankathelo esifutshane sencwadi «Isixeko kunye neenja» nguMario Vargas Llosa
U-Mario Vargas Llosa, umbhali wase-Peru kunye nomntu obalaseleyo kwingxelo yaseSpain-American ngophando lwakhe olukhulu lweendlela zokubaliswa kunye nobunzima kwilizwe lomhlaba, wapapasha umsebenzi wakhe "Isixeko sezinja" Ngo-1962. Lo yayingumsebenzi wokuqala wombhali kwaye ikwangowokuqala ukukhokela intshukumo ebizwa ngokuba ukugquma.
En "Isixeko kunye neenja", Ivakalisa ngokuchasana ne-machismo kunye nobundlobongela kwisikolo sezomkhosi eLima, ukugxeka uluntu lwasePeruvia.
Kwabo bangaziyo into ekubhekiswa kuyo ngumnxeba boom uncwadi, uhambelana nempumelelo enkulu ye Inoveli yesiLatin American eyaqala ekuqaleni Amashumi amathandathu eminyaka malunga. Kule ntsingiselo, kwavela imisebenzi ethile eyayicebisa ukuba kuqhekeke iifom zesiko zebali, kwaye kwangaxeshanye, zenze amagama ababhali bazo aduma kwihlabathi liphela. Phakathi kwabo kukho ababhali beenoveli zesigaba G. García Márquez, Carlos Fuentes kunye noMario Vargas Llosa phakathi kwabanye abaninzi. Basebenzisa ulwimi olubanzi noluninzi lwamazwe aphesheya kunangaphambili.
1 "Isixeko nezinja", ingantoni?
1.1 Ubhaptizo lwenja
1.2 Izehlo esikolweni
1.2.1 Ubusela bovavanyo lwechemistry kunye nokufa kwecadet
1.2.2 Ubungqina buka-Alberto kunye nokubandakanyeka kweJaguar
1.3 Ubomi emva kwesikolo
"Isixeko nezinja", ingantoni?
Isixeko kunye neenja ...
"Isixeko kunye neenja", epapashwe ngo 1962, ubalisa ngenkohlakalo eyayisenziwa kwiqela labafundi abaselula abavela kwisikolo sezomkhosi eLima. Ngokusebenzisa izixhobo ezahlukeneyo zokubalisa, ezobuchule belo xesha, uVargas Llosa ubhengeza iziphumo zokungaqondi kakuhle kwezomkhosi kwaye uyayigxeka inkohliso yeli hlabathi kunye nogonyamelo olukhoyo.
Emva koko, siza kushwankathela ngokufutshane (ukuba uyafuna ukuyifunda, kungcono ushiye ukufundwa kweli nqaku), ezinye zeendawo ezenzayo.
Ikholeji yasemkhosini liziko elifikelelwa ngamakhwenkwe ohlukeneyo ukuba afunde iminyaka emithathu yokugqibela kwisikolo samabanga aphakamileyo. Kuyo, abafundi baphantsi kobundlobongela kunye nokuziphatha okubi. Abafundi bebanga lesi-4 benza isiko elikhohlakeleyo lokungena kwabafundi abatsha ngaloo nyaka. Ukuphendula koku, abanye abantu abatsha benza into ebizwa ngokuba yi "Circle", iqela elithatha isigqibo sokuziphindezela kubafundi bebanga lesine. Ikhokelwa yiJaguar, inkwenkwe enobundlobongela eceba uhlaselo olungqongqo ngokuchasene nabachasi bayo kwaye ajike abe yinkokeli yabo bonke abanye amakhwenkwe akhuthaza ubundlobongela. URicardo Arana, ekuphela kwakhe ohleli ecaleni, umtyhala ngokungakhathali ngokupheleleyo kwaye ngenxa yoku ufumana ukubethwa ngenkohlakalo. Ukusuka kulo mzuzu uqhubeka ehlaselwa kwaye ethukwa ngabo bonke abanye abafundi.
Ubusela bovavanyo lwechemistry kunye nokufa kwecadet
UCava, omnye wabafundi besikolo, uyeba uvavanyo lwekhemistri elandela imiyalelo kaJaguar. Abasemagunyeni bafumanisa ngolwaphulo-mthetho nangona bengenako ukufumanisa umoni. Yiyo loo nto begqiba ekubeni baziphindezele kubo bonke abantu abancinci kwaye babavalele kwaye babagcine esikolweni ngokungenammiselo. Emva kweeveki ezininzi evalelwe, umlinganiswa owaziwa njengekhoboka wamgxeka uCava phambi kwamagosa kwaye uyagxothwa. Nangona kunjalo, ngexesha lokuqhuba okuthile ngelishwa kwenzeka ... I-cadet ifumana imbumbulu evela kumthombo ongaqhelekanga kwaye ife ...
Ubungqina buka-Alberto kunye nokubandakanyeka kweJaguar
UAlberto, obizwa ngokuba yiMbongi, wayenombulelo ngekhoboka (uRicardo Arana). Ngesi sizathu, ugxeka izitenxo kubalingane afunda nabo kwaye utyhola iJaguar kuLieutenant Gamboa. Ukrokrela ukuba ubengumbulali ka-Arana, kodwa akanabo ubungqina obaneleyo. Ukungenelela kukaLieutenant akuyi kuba luncedo; abaphathi bakhe bayala ukuphanda ukunqanda amanyundululu awonakalisa umfanekiso weziko. Bamsongela u-Alberto ukuba afezekise ukuthula kwaye a-odlulise u-lieutenant. AmaCadet, ohlwaywa ngolwazi olunikezwe yiMbongi, ngempazamo akholelwa ukuba iJaguar ibanike ngomzuzwana wenzondo. Emva koko ufumana ugculelo kunye nokuthotywa ngamaqabane akhe kwaye uzive elilolo okokuqala.
Ubomi emva kwesikolo
UJaguar, edanile sisimo sengqondo sabo bonke abanye abafundi, uyavuma kuGamboa ukuba nguye owaphula umthetho. Uguqukile, ukulungele ukunikezela, kwaye ukulungele ukujongana neziphumo. Kodwa uGamboa uyazi ukuba akukho mntu esikolweni onomdla wokuva uvumo lwakhe. Iyakubongoza ukuba ufunde kwimpazamo yakho kwaye ulungise ubomi bakho. Ekugqibeleni iJaguar iyadibana eluntwini kwaye iyatshata.
Iincwadi kufuneka uzifunde ngaphambi kokuba usweleke, ngokuka-Vargas Llosa
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Isishwankathelo esifutshane sencwadi «Isixeko kunye neenja» nguMario Vargas Llosa
UMaria Ana sitsho
Ngaphandle kwamathandabuzo luluncwadi oluhle. Ndizimisele ukuyifumana le ncwadi, kuba ndawuthanda lo mbandela
Phendula uMaria Ana
Ndicela ukuba ngubani obhale le nto usebenzisa i-machismo njengesichazi sobundlobongela, kukuphi ukusetyenziswa gwenxa nokusetyenziswa gwenxa kweli gama okwangoku, bubuphi ububhanxa kula maxesha ka-2018, kuya kufuneka usebenzise ubundlobongela, obungenabuni kunye nesicholo bonke ubundlobongela kunye nengqondo yobubhanxa bobufazi.
Enkosi, yandisebenzela soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Molweni zihlobo, abasebenzisi beintanethi, ukubulisa kunye nokwanga wapos
UDiego waseDora sitsho
Ndaya e-guzmen y gomez ndafumana i-burrito yeedola ezintathu kodwa eli nenekazi lalingathethi isingesi ndathi ke pls ndinike i-taco bitch kwaye ke iqhubeke nokuba ngunongogo kumzi mveliso wephonografi waseMexico. Kungekudala emva kokuba ndimtsalele umnxeba kwaye wandinika i-suk suk, kunye nesosi yasimahla ifakiwe. emva koko wayisa e-esileni ngaphambi kokuba achithe itotilla. emva koko wagxothelwa e-kenya, ndithetha venezuela apho umakhulu wakhe wayemlinde khona nge-arepa de crap. I-arepa yayigcwele i-spunk yamadoda kunye nelindle labasetyhini, yayiyeyona nto inqabileyo kwaye yaphela kwincwadi yam yokupheka ye-tia marias apho kwacetyiswa khona ukuba u-mario testino apheke kwi-tv ​​ebukhoma, apho atyhola khona incwadi, kwaye incwadi leyo ayisasebenzi ivuliwe ngenxa yespin. emva koko waya emarikeni wayokufumana imveliso ye chille con carne kwaye ngempazamo wathenga inyama yenkomo yesini. eyayifakwe i-chlamyedia. UDiego emva koko wathi ku-mario, ndixolile mfondini kodwa kubonakala ngathi ungowesini sakho, ke siza kubususa kuwe ubufanasini ngokukunika ezinye iitamales zika-makhulu noomakhulu eziphekwe ngothando nothando.
Phendula u-diego ukusuka ku-dora
Kamila avila sitsho
Ndiyawuthanda lo msebenzi mhle kakhulu ndawufunda amaxesha ama-3
Phendula uKamila Avila
UNICOLLE GONZALES RAMOS sitsho
Emva kwayo yonke loo nto, i-jaguar iphela ifunda kwiimpazamo zayo kwaye ilungisa ubomi bayo, isazi ngayo yonke into eyenzileyo kunye nokutshata.
Phendula UNICOLLE GONZALES RAMOS